Nanampy Ireo Fianakaviana Kiorda Any Iraka Mba Hankalaza Ny Newroz Amin’ny Loko Marevaka Sy Ny Fifaharana Ireto Mpikatroka Ireto · Global Voices teny Malagasy
Nanampy Ireo Fianakaviana Kiorda Any Iraka Mba Hankalaza Ny Newroz Amin'ny Loko Marevaka Sy Ny Fifaharana Ireto Mpikatroka Ireto
Voadika ny 28 Marsa 2017 5:09 GMT
Sary avy any Ankavia Miankavanana : Bakhsheen Taha Solaee, Biza Barzo ary Sazan M. Mandalawi. Avy amin'ny Rudaw.
Nivory hankalaza Newroz ireo fianakaviana Irakiana manerana an'i Kurdistan mba handray ny taona vaovao, araka ny fanisanandro nentim-paharazana Kiorda sy Iraniana, ary mba hankalazana ny kolontsain'ny fifaharana efa naharitra taonjato maro.
Mankalaza ny Newroz na tononina koa hoe Nawruz miaraka amin'ny tononkalo, dihy, afomanga, hafaliana sy ny fitsambikinana ambonin'ny afo ny Kiorda. Zava-dehibe mihoatra noho ny fomban-drazana fahiny antsoina hoe Zoroastrianina ny Newroz ho an'ny vahoaka Kiorda. Maneho fifaharana nandritra ny taonjato maro ny afo sy ny Newroz ho an'ny vahoaka Kiorda. Ny anganongano fahiny dia voamariky ny tantara fa tamin'ny andro voalohany tamin'ny Newroz dia noresen'ilay mpanefy vy ilay olon-dozabe matanjaka sy nanjakazaka. Eny fa na dia ankehitriny aza, satria voazarazara ao Torkia, Syria, Iraka ary Iran maoderina ireo vahoaka Kiorda, dia mibaribary fa manampy amin'ny fanoherana ny fanafoanana ny mari-panondroana Kiorda manoloana ny nasionalisma Arabo na Tiorka ny fankalazana ny Newroz.
Ho an'ireo Kiorda mankalaza ny Newroz, lasa manan-danja ny akanjo nentim-paharazana Kiorda Jili Kurdî midorehitra sy mareva-doko. Saingy lasa tsy takatra intsony fa lafo vidy ny Jili Kurdî ho an'ny fianakaviana Kiorda maro rotidrotiky ny ady tao Iràka.
Mba hiatrehana io olana io, nanomboka ny fanentanana #AkanjoKiordaHoAnnyRehetra ireo mpikatroka tao amin'ny media sosialy ary nangataka ireo olona manerana ny faritra mba hanome akanjo Kiorda. Olona an'arivony mahery no nizara ny tenirohy tao amin'ny Facebook sy Twitter, ary maro no nanolo-tena mba hanampy tamin'ny fizarana ny fanomezana navela tao amin'ny toerana hangalana izany tao Sulaymaniyah, Erbil ary Duhok.
Nilaza i Biza Barzo, mpianatra iray 23 taona tao amin'ny Oniversite Amerikana ao Irak-Sulaimani, sady iray amin'ireo nanomboka ny fanentanana raha niresaka tamin'ny Global Voices fa fianakaviana maherin'ny 450 izay mipetraka any amin'ny faritra mahantra no nahazo akanjo Kiorda vaovao hanaovana amin'ny Newroz.
Nanatevin-daharana an'i Barzo tamin'ny fampiroboroboana ny fanentanana i Bakhsheen Taha Solaee, mpikatroka mpiaro ny tontolo iainana iray 23 taona sy Sazan M. Mandalawi, mpanoratra ny “Ny Akaniko ao Kiordistan”. Nanoratra i Mandalawi tao amin'ny bilaogy iray hoe:
Manangona akanjo Kiorda efa avy nampiasaina (na vaovao) amin'ny habeny, karazany, ary amin'ny lokony ho an'ny lehilahy sy vehivavy rehetra izahay. Hozaraina amin'ireo fianakaviana mahantra ao amin'ny Faritra Kiordistan. Tolotra ho an'ny vondrom-piarahamonina izy ity ary afaka matoky ianao amin'ity Newroz ity fa manana akanjo iray hanaovana amin-kafaliana ihany koa ireo hafa rehefa manao ny akanjo Kiorda tsara tarehy amin'ny fankalazana, .
Ireo akanjo efa vonona ho atao fanomezana . Loharanon-tsary: Biza Barzo tao amin'ny Facebook.
Maro tamin'ireo izay tsy afaka nanome fanomezana no nampahery ny hafa. Hoy ilay Mpianatra SOAS Speda Mizuri monina any Londres raha nisioka hoe:
Mba ataovy fanomezana azafady raha manana akanjo Kiorda izay tsy hanaovana intsony ianao! Ataovy marevaka ho an'ny rehetra ity Newroz ity!
Ny Akre ao Iràka no tena ivon'ny Newroz Fomba Nentim-paharazana Kiorda
Araka ny angano fahiny, niaina teo ambanin'ny olon-dozabe mpanao didy jadona Zuhak ny Kiorda, izay tsy namela ny lohataona ho tonga tao Kurdistan. I Kawa no Mpanefy vy iray nampiofana miaramila mpikomy, ary nandresy an'i Zuhak tamin'ny andro voalohany tamin'ny Newroz. Nomarihina tamin'ny fandrehetana afo teny an-tampon-kavoana ny fandresena. Nampiasaina mba ho mariky ny tolona ho fanafahana Kiorda nanomboka tamin'izay ny afo.
Izany no nahatonga ny fankalazana Newroz lehibe indrindra natao tao Akre, Kiordistan Irakiana, izay antsoina ihany koa hoe Aqrah, any amin'ny governoràn'i Ninive, izay eo ambany fanaraha-mason'ny Governemantam-paritra Kiordistan (KRG).
Voalaza fa toerana nahaterahan'i Kawa ilay tanàndehibe ary eny angamba ny toerana hahatsapana indrindra ny fanahin'i Newroz ihany koa. Arehitry ny olona amin'ny fanilo eny an-tampon-kavoana ny afo izay mihazakazaka miolanolana manao zigzag manaraka ny lalana avy eo ny afo. Mandihy amin'ny feon'ny afomanga sy ny mozika nentin-drazana Kiorda ny olona eny ampototry ny havoana, mifanila amin'ny tranobe Ottoman tamin'ny taonjato faha-19, raha mitsambikina eo ambonin'ny afo mirehitra kosa ny hafa.
Ireto misy lahatsary roa ahitana ny Newroz nankalazaina tao Akre tamin'ny taona 2016 sy 2015 :
Nizara ny nofinofy hanaraka ny ohatr'i Kawa sady hamarana ny jadona ny Kiorda sasany afaka mankalaza ny Newroz ankalalahana kokoa noho ny hafa.
Any ambadiky ny sisintany misy ny zava-mitranga ao KRG, nankalaza ny Newroz voalohany tamin'ity taona ity ireo Kiorda ao Manbij, any Avaratr'i Syria, hatramin'ny nahazoany fanafahana avy amin'ny fitondrana ISIS tamin'ny herintaona.
Nandray anjara tamin'ny fetibe niaraka tamin'ny Kiorda ireo vondrom-poko hafa mipetraka any amin'ny faritra avaratr'i Syria, anisan'izany ny Arabo sy ny Turkmen, izay midika ny mety hisian'ny filaminana eo amin'izy ireo ao amin'ny faritra.
Nilaza tamin'ny Kurdistan24 i Berivan, vehivavy iray izay nandray anjara tao amin'ny lanonana tao Manbij hoe:
Mankalaza ny Newroz ireo Kiorda, Arabo, sy ny Turkmen ao Manbij . Hoy isika amin'izy ireo hoe Arahaba Nahatratra ny Newroz .